Maleeshiya ka tirsan Puntland oo ku soo jeedda Xamar, mas'uuliyiintii ay qaraabada ahaayeen Col. Cabdullahi Yuusuf iyo Xuseen Caydiid oo ay u magacaabeen nabadgeliyada Muqdisho oo howshoodi wadi la' iyo wara kale. Ruunkinet 29/01/07
Maleeshiya aad u hubeysan oo laga keenay Puntland ayaa ku soo jeeda magaalada Muqdisho.
Maleeshiyadan oo soo dhaaftay magaalada Beledweyne maanta ayaa la sheegay in loogu yeeray in ay wax ka qabtaan ammaan darrida ka taagan magaalada Muqdisho si ay u xasiliyaan.
Warar kale ayaa sheegay in ay doonayaan maleeshiyadan inay caburiyaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho inta ay ciidamada Itoobiya ku sugan yihiin Xamar.
Xamar ayaa waxaa ka taagan ammaan darro aad u weyn ayadoo dad rayid ah si joogta ah loogala baxa guryahooda habeenki loona geysta sida la sheegayo jir dil iyo tacadiyo ay ka mid yihiin dil iyo wax yaabo kale in kastoo ay jiraan dad kale oo rayid ah oo lagu dilo goobo kale duwan oo ka tirsan magaalada Muqdisho.
Dhanka kale, mas'uuliyiin ay qaraabo yihiin wasiirka arrimaha gudaha mudane Xuseen Caydiid iyo madaxweyne Cabdullahi Yuusuf oo dhawaan loo kala magacaabay taliyaha ciidanka booliiska ee gobolka Banaadir iyo hub uruurinta Muqdisho ayaa sida la sheegay wadi la' howlihii loo xilsaaray.
Ciidamada taageersan madaxweynaha iyo kuwa Itoobiya ayaa si joogta ah loogu geystaan weerar gaadma ah marka ay marayaan magaalada Muqdisho iyo marka ay baarayaan guriyaha habeennimadii.
Madaxweynaha, ra'isul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha gudaha ayaa lagu eedeeyay dhowr jeer in ay si gaar ah xilal kala duwan ugu dhiibayaan dad ay qaraabo yihiin.
Ra'isul wasaare Geeddi ayaa magaalada Muqdisho dekeddeeda iyo garoonkeeda dayuuradaha u magacaabay mas'uuliyiin ay qaraabo yihiin iyadoo ammaanka garoonka dayuuradaha madaxweynaha u magacaabay Gaashaale ay qaraabo yihiin.